Pregorexia, cabsi laga qabo in miisaanka uu kordho xilliga uurka | Bezzia
Tony Torres | 11/01/2022 23:55 | Uurka
Waxaa jira cabsi badan oo ka dhalan kara uurka, gaar ahaan marka ay tahay markii ugu horeysay. Wax kasta oo aan la garanayn waxay sababaan walaac, sababtoo ah hubaal la'aanta garan la'aanta waxa dhici doona waxay keentaa heerar sare oo walbahaar. Dumarka qaarkood, wax ka qabashada dhammaan isbeddellada uurka waa mid xiiso leh, laakiin kuwo kale oo badan, waa cabsi weyn.
Cabsida miisaanka korodhka xilliga uurka ayaa jirta, waxay leedahay sifooyin guud iyo magac ku habboon, gaar ahaan pregorexia. Ciladdaan, inkastoo aysan ku jirin Buugga Cudurrada Maskaxda sida cudurrada kale sida anorexia ama bulimia, waa xaqiiqo waxaana loo yaqaan anorexia ee haweenka uurka leh.
1 Waa maxay pregoresia?
1.1 Calaamadaha cunno-xumada ee haweenka uurka leh
1.2 Khatarta pregorexia ee hooyada iyo dhallaanka
Waa maxay pregoresia?
Pregorexia waa cillad cunto oo si gaar ah u dhacda xilliga uurka. Dabeecadda ugu weyn ee xanuunkani waa cabsida kor u kaca miisaanka hooyada mustaqbalka. Dhibaato halis gelin karta caafimaadka hooyada iyo uurka labadaba. Cunto-xumadani waxay la wadaagtaa sifooyinka kuwa kale ee la midka ah. The uur leedahay jimicsi xad dhaaf ah, waxay si badheedh ah u xakamaysaa qaadashada kalooriga, marka lagu daro cunista xad-dhaafka ah iyo nadiifinta ku xigta.
Ciladdani waxay ku dhici kartaa haweenka aan horay ula kulmin dhibaatooyinka cuntada. Si kastaba ha ahaatee, waxay caadi ahaan ku dhacdaa dumarka hore u noolaa ama la nool cilladaha cunto-cunidda, sida anorexia ama bulimia. Si kastaba ha ahaatee, in aad dhibaatadan hore u soo martay ma dammaanad qaadayso taas Waxay u kobcin kartaa si la mid ah uurka.
Calaamadaha cunno-xumada ee haweenka uurka leh
Dumarka oo dhan si isku mid ah uma dareemaan isbedelada jirkooda, inkastoo shay caadi ah uu yahay in si dabiici ah loo qaabilay oo ay u maleynayaan in ay sabab u tahay xaqiiqda ah in nolol cusub ay ku soo korto gudahaaga. Dumarka qaarkood, markay arkaan sida calooshu u korto waa shucuureed, laakiin kuwa kale, maaha wax dareen ah oo aan dhibaato u keenin. Si kastaba ha ahaatee, marka cabsida laga qabo in miisaanku kordho ay leedahay asal maskaxeed, calaamadahan la xidhiidha pregoresia ayaa laga yaabaa inay soo baxaan.
Uurka iska ilaali inaad ka hadasho uurkaaga ama u sameeyaa si aan run ahayn, sidii iyada oo aan iyada la jirin.
Iska ilaali in aad wax ku hor cunto dadka kale, door biday in uu wax ku cuno si qarsoodi ah.
Leeyahay waswaas leh tiri kalooriyada.
Si aan caadi ahayn ayaad u jimicsanaysaa, xad-dhaaf ah, iyada oo aan la tixgelin calaamadaha caadiga ah ee uurka.
Way iska matagi karaan, inkastoo ay had iyo jeer isku dayi doonaan inay si gaar ah u sameeyaan.
Heerka jirka, way fududahay in la arko haweenkaas ma korodho miisaan sida caadiga ah uurka.
Calaamadahaan waxaa laga yaabaa inaan la ogaan karin haddii aadan si dhow ula noolaan haweeneyda uurka leh. Laakiin si kastaba ha ahaatee, aad u soo shaac baxdo bartamaha uurkaMarka calooshu si muuqata u korodho, lugaha, gacmaha, wejiga ama miskaha ayaa sidoo kale si dabiici ah u balaadha uurka dartiis. Inkasta oo isbeddelladani aanay isku mid ahayn haweenka oo dhan, haddana waxay aad u muuqdaan marka aysan si caadi ah u dhicin.
Khatarta pregorexia ee hooyada iyo dhallaanka
Khatarta ka dhalan karta cunno xumidaan xilliga uurka waxay noqon kartaa tiro badan, labadaba hooyada iyo dhallaanka. Marka hore, uurjiifku ma helo nafaqooyinka uu u baahan yahay si uu si caadi ah u kobco. Ilmuhu wuu awoodaa ku dhasha miisaan yar, dhibaatooyin neefsasho, dhalmo degdeg ah, cillado ama xanuunada neerfaha ee darnaanta kala duwan, iyo kuwo kale.
Hooyada, pregorexia waxay u keeni kartaa dhibaatooyin halis ah sida dhiig-yaraan, nafaqo-xumo, arrhythmia, timaha oo daata, bradycardia, macdanta oo yaraada, lafaha oo yaraada, iwm. Ma aha oo kaliya inta aad uurka leedahay, dhibaatooyinka caafimaadku waxay ku saameyn karaan mustaqbalka fog. Ka sokow dhammaan dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda in cilladani ay keento.
Sidaa darteed, haddii aad u malaynayso inaad ka cabanayso pregoresia uurkaaga, Aad bay muhiim u tahay in aad ogolaato in naftaada lagu daryeelo oo aad naftaada geliso gacmaha xirfadle. Badbaadadaada iyo caafimaadka ilmahaaga mustaqbalka, sababtoo ah hadhow waxaad awoodi doontaa inaad ku soo noqoto miisaankaaga, laakiin haddii ay jiraan dhibaatooyin xagga koritaankeeda, marnaba ma heli doontid suurtogalnimada inaad dib ugu noqoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Uurka » Pregorexia, cabsi laga qabo in miisaanku kordho xilliga uurka